रोकिएन बामदेव गौतमको आकांक्षाः काठमाडौं ७ बाट उठ्ने तयारी - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
रोकिएन बामदेव गौतमको आकांक्षाः काठमाडौं ७ बाट उठ्ने तयारी
प्रकाशित मिति: २३ आश्विन २०७५, मंगलवार
काठमाडौं । नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउनका लागि डोल्पा लैजाने प्रयास असफल भएपछि अब काठमाडौंं क्षेत्र नम्बर ७ खाली गराउने विकल्पबारे पार्टीमा छलफल सुरु भएको छ  । नेकपाको सोमबारको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई सांसद बनाउनका लागि काठमाडौंं क्षेत्र नम्बर ७ खाली गराउने विषयले प्रवेश पाएको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले उक्त क्षेत्रका सांसद रामवीर मानन्धर आफ्नो पद छोड्नका लागि सकारात्मक रहेको जानकारी बैठकलाई गराएका छन् । एक नेताका अनुसार पार्टीले आवश्यकता देख्छ भने आफू पद छोड्न तयार रहेको भनी मानन्धरले आफूलाई बुझाएको पत्र अध्यक्ष ओलीले बैठकमा पेस गरेका थिए ।
‘अन्य क्षेत्रको प्रयास सफल नभएपछि अब काठमाडौं ७ विकल्पका रूपमा आएको छ, अध्यक्षले नै सांसदबाट आएको सहमतिबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको छ,’ नेकपा सचिवालय स्रोतले भन्यो । सांसद मानन्धरले भने राजीनामा दिने वा ओलीलाई बुझाएको सहमतिपत्रबारे बताउन चाहेनन् । पार्टीले गर्ने कुनै पनि निर्णय मान्न आफू तयार रहेको उनले बताए । ‘म पार्टीकै प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको हुँ,’ मानन्धरले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीले आवश्यकता देखे म पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार छु ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रदेश ३ को राजधानीको टुंगो मतदानबाट
काठमाडौं । प्रदेशसभाको आगामी बैठकले प्रदेश नं ३ को स्थायी राजधानीबारे टुङ्गो लगाउने भएको छ । सभामुख […]
पप्पुको मुद्दा अघि बढाउन किन आलटाल ?
काठमाडौं । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक अध्यक्ष सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको […]
सरकारको नियुक्ति थप विवादित बन्दै, पार्टीको काँधमा अपजसको भारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएका छन् । […]
कांग्रेसमा दुई उपसभापति, प्रकिया पूरा नगरी गच्छदारलाई उपसभापति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेता विजयकुमार गच्छदार मनोनीत भएका छन । […]
सरकारले किन लुकायो मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू ?
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू तत्काल जानकारी नगराउने भएको छ । आइतबार साँझ बालुवाटारस्थित […]
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदै
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरि नेपाल आउँदैछन् । उनी मंसिर २६ गते नेपाल आउन लागेका हुन् । […]
पढ्न भन्दा कामका लागि आउनेलाई लक्षित गर्दै अष्ट्रेलिया,हजारौं विद्यार्थीको भिजा क्यान्सिल
एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा चितवनको दोस्रो हार
मानव तस्करीको आरोप लागेकी राजदुत लक्कि शेर्पालार्इ बर्खास्त गर्ने अोली-प्रचण्डको तयारी
नेपालमै यस्तो परम्परा जहाँ ६४ वटा बोका मान्छेको दाँतले काटेर मार्ने गरिन्छ
देउवाविरुद्ध ठमेलमा गोप्य भेला, उट्पट्याङ प्रस्तावले आफ्नै समूहलाई तनाव